प्रतिनिधिसभा सभामुखको विवाद टुंगिएको छ । पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई किनारा लगाउँदै अन्ततः पूर्व माओवादी र वर्तमान नेकपा नेता अग्नि सापकोटाले सभामुख पद प्राप्त गरेका छन् ।
सापकोटा आन्तरिक बाह्य अवरोध छिचोल्दै सभामुख बनेका हुन् । उनी सभामुख बनेपनि खतरामुक्त भइसकेका छैनन्, आगामी दिनमा अप्ठ्यारो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने स्थिति छ । संक्षिप्तमा भन्दा अग्नि सापकोटाका भावी दिनमा अग्निपरीक्षा हुँदैछ ।
सापकोटा सभामुख त्यति सजिलै बनेका होइनन्, सामान्य परिस्थितिमा उनले सभामुखजस्तो महत्त्वपूर्ण पद प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था थिएन । प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका शक्तिशाली अध्यक्ष केपी ओलीले अन्तिम दमसम्म सापकोटालाई सभामुख बन्न नदिने कसरत गरेको नै हुन् । जुनसुकै मूल्य चुकाएर पनि सभामुख आफ्नो विश्वास प्राप्त सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई बनाउने एक सुत्रीय एजेण्डा बोकेका प्रधानमन्त्री ओलीले सापकोटालाई स्वीकार गरेको बाध्यताले मात्र हो ।
सापकोटा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डका विश्वास प्राप्त व्यक्ति हुन् । उनको रोजाइमा सापकोटा निरन्तर पर्दै आएका छन् । पार्टीभित्र होस् कि सरकारमा होस् प्रचण्डले प्रायः अग्नि सापकोटालाई सम्झिने गरेका छन् तर अहिले सापकोटा प्रचण्डको पहल र बलमा मात्र सभामुख बनेका होइनन् । नेकपा भित्रको समीकरण र सन्तुलन प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा रहेको बेला प्रचण्डले सुभासचन्द्र नेम्वाङको पक्षमा हात उठाएका नै हुन् । नेकपाको बदलिँदो अन्तरपार्टी शक्ति समीकरण र सन्तुलनमा प्रधानमन्त्री ओली कमजोर बनेका कारणले मात्र सभामुख बन्ने अवसर सापकोटाले प्राप्त गरेका हुन् ।
केही समययता नेकपाको आन्तरिक राजनीति मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीति पनि अमेरिकी नीति र रणनीतिको गोलचक्करमा फस्दै आएको छ । अमेरिकी इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी र एमसीसीको पक्षविपक्षमा नेकपा २ ध्रुवमा विभाजित भएको छ । अमेरिकी नीति र रणनीतिको पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली खुलेर मात्र होइन, नाङ्गिएर लागिपरेका छन् । एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउन पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराले असहयोग गरेको र त्यसको बदला स्वरुप महरालाई यौनकाण्डमा फसाइएको आरोप प्रधानमन्त्री ओलीलाई लाग्दै आएको छ । यो आरोपलाई घटनाक्रमले सत्य सावित पनि गर्दैछ ।
यसरी प्रधानमन्त्री ओली अमेरिकी नीति र रणनीतिको पक्षमा खडा भएका छन् भने त्यसको विरोधमा अन्य नेता कार्यकर्ता खडा भएका छन् । पूर्व एमालेका ओली विरोधी मात्र होइन, ओली समर्थक पनि इण्डो–प्यासिफिक र एमसीसीविरुद्ध खडा हुँदै गएका छन् । यसबाट प्रधानमन्त्री ओली एक्लिँदै र कमजोर हुँदै गएका हुन् । पूर्व एमाले एकढिक्का भएको भए सापकोटाले सभामुख पद पाउने कुनै सम्भावना नै थिएन् । त्यो अवस्थामा अन्तरपार्टी जीवनमा शरणार्थीको रुपमा रहेका पूर्व माओवादीको साथ पनि सापकोटाको पक्षमा हुने थिएन ।
अमेरिकी इण्डो–प्यासिफिक रणनीति र एमसीसीलाई निर्लज्जतापूर्वक बोकेको कारणले नै प्रधानमन्त्री ओली शक्तिहीन हुँदै गएको र त्यसको लाभ अग्निप्रसाद सापकोटाले प्राप्त गरेका हुन्भन्दा अतिशयुक्तिपूर्ण हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीको इच्छा विपरीत सभामुख बनेका सापकोटाको अगाडि निकै चुनौती छन् । सापकोटालाई मौका पारेर ढलाउने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओली रहेको घटनाक्रमले देखाइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका दाहिना हात एनजीओकर्मीले सापकोटा विरुद्धको अभियानलाई दिइरहेको तीव्रताले पनि यो संकेत गर्दछ ।
सापकोटा इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी र एमसीसी विरोधी नेकपाका नेता कार्यकर्ताको बलमा सभामुख बनेका हुन् । सापकोटा एमसीसी विरोधी पक्षको भावना अनुसार अगाडि बढ्ने हुन् कि प्रधानमन्त्री ओलीसँग आत्मसमर्पण गरेर एमसीसी कित्तामा खडा हुने हुन् ? यो प्रश्न सबैको लागि जिज्ञासाको विषय बनेको छ । हुन त सापकोटालाई सभामुख बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले सहयोग गर्ने र सापकोटाले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउन सहयोग गर्ने ओली र प्रचण्डबीच सहमति भएको चर्चा पनि राजनीतिक वृतमा नभएको होइन तर यो चर्चा त्यति विश्वासजनक देखिँदैन ।
प्रधानमन्त्री ओली जुनसुकै हत्कण्डा प्रयोग गरेर भएपनि एमसीसी अनुमोदन गराउन लागिपरेको कुरा सार्वजनिक भइरहेको छ । आफूसरहका नेतालाई पेलेर अगाडि बढिरहेका प्रधानमन्त्री ओली अहिले निकै नरम देखिएका छन् । एमसीसी अनुमोदनको लागि प्रधानमन्त्री ओलीले अन्य नेताहरूसँग गरिरहेको हारगुहारले पनि यो कुराको संकेत गर्दछ । अन्तिममा केही नलागे संसदबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गराएर भएपनि एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली लागिपरेका छन् । पार्टीको केन्द्रीय समितिमा छलफल नै नगराई एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री ओली रहेको राजनीति वृत्तमा चर्चा छ । यसको लागि सभामुख सापकोटालाई प्रयोग गर्ने तानावाना प्रधानमन्त्री ओली बुनिरहेका छन् ।
नेकपाको अन्तरपार्टी जीवनमा प्रधानमन्त्री विरोधी खेमा दिन प्रतिदिन बलियो बन्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको खेमाका नेता–कार्यकर्ता पलायन हुने क्रम बढ्दो छ । प्रधानमन्त्री ओली विरोधी खेमाका नेता कार्यकर्ताले राजनीतिक आत्मसमर्पण गर्ने सम्भावना न्युन छ । आत्मसमर्पण गर्दा उनीहरूको राजनीतिक जीवन संकटग्रस्त हुने अवस्था छ । नेकपाका आम कार्यकर्ता र समर्थक इण्डो–प्यासिफिक रणनीति र एमसीसीको विरोधमा खडा हुँदै गएका छन् । आम जनताको सेन्टमेन्ट पनि यतै बढ्दै गएको छ । यो अवस्थामा सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष आत्मसमर्पण गर्न त्यति सहज छैन ।
हुन त पद बाहिर रहँदा र पदमा हुँदा व्यक्तिको भूमिका फरक–फरक हुने गरेका कैयौ घटना छन् । अवसर पाउना साथ कतिले आफ्नो धरातल भुल्ने गरेका छन् । सभामुख सापकोटालाई बाहिरबाट प्रहार गर्ने र भित्रबाट घेराबन्दी गर्ने रणनीतिलाई प्रधानमन्त्री ओली पक्षधरले तीव्रता दिएका छन् । सभामुख सापकोटाको मूल चाबी बोकेका नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले खुट्टा कमाउने हुन् कि भन्ने आशंका गरिँदैछ । सभामुख सापकोटाले आत्मसमर्पणको बाटो रोज्ने हुन् कि राष्ट्र र जनताको लागि विदेशी षड्यन्त्रसँग जुध्ने हुन् ? यसको परिणामको लागि केही दिन पर्खिनुपर्ने छ । जेहोस्, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको अग्निपरीक्षा हुँदैछ ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन कहिले ? नेकपा प्रवक्ताले दिए यस्तो जवाफ
संवैधानिक निकायमा पदपूर्तिको काम अगाडि बढाउन सरकारलाई नेकपाको सुझाव